‘‘တက်စရာ ရုံးမရှိဘူး’’ ချင်းလွှတ်တော်အမတ် နှင့် အင်တာဗျူး | ဗန်းမော်သား
Home > CPP, Ethnic, Party	> ‘‘တက်စရာ ရုံးမရှိဘူး’’ ချင်းလွှတ်တော်အမတ် နှင့် အင်တာဗျူး
September 14th, 2011 | Khonumthung News
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမည်ခံ အရပ်သား အစိုးရသစ် တက်လာပြီးနောက် ၄ လအကြာ ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စု လွှတ် တော်ကို သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့က ခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ပြီး၊ လာမည့် စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့တွင် တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည် နယ် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများ ဆက်လက် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်သည်။
ဖြေ ။ ။ လွှတ်တော်မှာက တကြိမ်မှာ ကဏ္ဍ ၄ ချက်ထက် ပိုမတင်ပြရဘူးဆိုပြီးတော့ နည်းဥပဒေထဲမှာ ပြဌာန်းထား တယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ကြိုက်သလောက်လည်း တင်ပြလို့မရဘူး၊ အဲဒီတော့ ဖလမ်းမြို့နယ်အနေနဲ့က စံချိန်မှီ ဘော်လုံးကွင်း မရှိဘူး၊ ပြီးတော့ ခရိုင်မြို့တမြို့ဖြစ်ပြီးတော့ ယနေ့ထိ ဂေါက်ကွင်းလည်း မရှိသေးဘူးပေါ့လေ၊ အဲလိုဟာမျိူး၊ ပြီးတော့ ရိဒ် – ဖလမ်း-ဝေဘူလ-ကလေး ကားလမ်းက (Maintenance) ပြုပြင်မှုမရှိဘူး ဒါမျိုးတွေ တင်ပြဖို့ရှိပါတယ်။
မေး ။ ။ ပထမအခေါက် လွှတ်တော် အစည်းအဝေးကနေ ဦးနာ့ထန်းကို ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ ဥပဒေပြုရေးကော်မီတီ ဥက္ကဌ အဖြစ် ခန့်အပ်ထားတယ်နော်၊ အဲဒီ ကော်မီတီ အနေနဲ့ ဘာတွေ ဆောင်ရွက်ဖြစ်ပါသလဲ?
မေး ။ ။ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ ဒါမှမဟုတ် ၀န်ကြီးးချုပ်ကရော ဦးနာ့ထန်းတို့လို ပြည်နယ်လွှတ်တော် အမတ်တွေကို အလုပ်ကိစ္စ တိုင်ပင်တာ ဆွေးနွေးတာတို့ မရှိဘူးလား?
ချင်းလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအကြောင်း ဒေါ်စု စေတနာကို ကြည့်တတ် မြင်တတ်ရင်ကျေးဇူးတင်မှာပါ